आफ्नो परिवार भेट्न १७ हजार किलोमिटर यात्रा गर्ने सानी कुकुर :: Setopati
आफ्नो परिवार भेट्न १७ हजार किलोमिटर यात्रा गर्ने सानी कुकुर पिप परिवारबाट कसरी अलग भई? उसलाई किन यति लामो यात्रा पार गर्नुपर्‍यो?
सिएनएन अस्ट्रेलिया, असोज ६
पिप कुकुर। तस्बिरः सिएनएन
जो, गाइ, म्याक्स र क्याम एल्बेक पिपसँग।
'मलाई थाहा थियो, पिपलाई आयात गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ,' जोले सिएनएन ट्राभललाई भनेकी छन्।
'पिपको धेरै समय डुंगामै बितेको थियो। अब ऊ विलियम्ससँग भैंसी गोठमा बस्दै थिई,' जोले त्यो बेलाको समय सम्झिँदै भनिन्, 'त्यो सम्झिँदा मलाई अहिले पनि कस्तो-कस्तो लाग्छ।'
'पिप जोसँग जाने निर्णय गर्छे उसैसँग बस्ने सम्झौता थियो,' स्टेनवर्गले सिएनएन ट्राभललाई भनेकी छन्, 'ऊ मसँग रमाई। केही दिनमै मसँग बस्न पनि आई।'
उनले भनेकी छन्, 'डुंगामा यात्रा गर्ने परिवारले पिपलाई बेवारिसे अवस्थामा छाडे अनि उनीहरू अस्ट्रेलिया फर्के भन्ने बुझेँ। मैले ती परिवार कस्ता निर्दयी होलान् भन्ने सोचेकी थिएँ।'
'तर जब उनीहरूसँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो, मेरा आँखा खुले। त्यसपछि लाग्यो, उनीहरूले जति पिपलाई माया र हेरचाह गर्ने अरू कोही हुनै सक्दैन। मैले उनीहरूबारे पूर्ण विवरण नपाएका कारण गलत धारणा बनाएँ,' स्टेनवर्गले एल्बेक परिवारसँगको संवादपछि फेरिएको धारणा सुनाइन्।
भन्छिन्, 'म सधैं पिपका फोटा सामाजिक सञ्जालमा राख्थेँ। पिपले आफ्ना फ्यान कमाउँदै थिई।'
'अमेरिकाबाट कुकुर निर्यात गर्न अमेरिकाबाटै सिफारिस लिनुपर्छ। यसका लागि कुकुरको स्वास्थ्य राम्रो छ भन्ने प्रमाण हुनुपर्छ। रेबिज सम्बन्धी रगत परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ,' जोले प्रक्रिया बुझाइन्, 'यो सबै परीक्षण न्यूयोर्कमा हुन्थ्यो। तर त्यो कार्यालय बन्द भइसकेकाले काम गर्न एकदमै गाह्रो भयो।'
पिपको मायाले एल्बेक परिवार छट्पटिसकेको थियो। जोले प्रयास गर्न छाडिनन्। कैयौं सम्पर्क गरेपछि उनले पत्ता लगाइन्, पिपलाई न्युजिल्यान्ड हुँदै आयात गर्न सकिन्छ। यसका लागि पिप न्युजिल्यान्डको अक्ल्यान्ड सहर आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। जोले अस्ट्रेलियाकै 'जेटपेट्स' नामक पशु आयात कम्पनीमार्फत् पिपलाई लस एन्जलसदेखि अक्ल्यान्ड ल्याउनसक्ने सम्भावना देखिन्।
स्टेसीलाई पिप खुबै मन परेको सम्झनामा जो जिस्किँदै भन्छिन्, 'जब स्टेसीले पिप पाइन्, उनी साँच्चै पिपसँग प्रेममा डुबेकी थिइन्। मलाई त पिप मैले फिर्ता नै पाउँदिनँ कि भन्ने समेत लागेको थियो।'
जोको यो आह्वानमा 'द स्पार्की फाउन्डेसन'मा कार्यरत मेलिसा योङले जवाफ फर्काइन्। यो फाउन्डेसन कुकुर बचाउ अभियानमा संलग्न छ। मेलिसा स्वयंसेवी रूपमा पिपलाई लिएर अमेरिकाभर उडान गर्न तत्पर भइन्।
जो भन्छिन्, 'हामी त्यही उडान हेरिरहेका थियौं। कहाँ आइपुग्यो भन्दै छट्पटेका थियौं।'
'सबभन्दा ठूलो डर यतिका समयपछि पिपले हामीलाई बिर्सिन्छे होला भन्ने थियो,' जोले भनिन्, 'मेरा बच्चाहरू पनि धेरै चिन्तित थिए। उनीहरूले पिप आफूहरू नजिक आवोस् भनेर हट-डग लिएर गएका थिए।'
'यति लामो पर्खाइपछि उसलाई फिर्ता पाउनु अचम्मको कुरा थियो। हामी निकै खुसी छौं। उसले हामीलाई भुलिनछे,' जोले भनेकी छन्।
'मलाई थाहा छ यो कुकुर हो। तर हामी उसलाई हाम्रै सदस्य मान्छौं,' जोले भनेकी छन्, 'डुंगामा बस्दा सबैले काम गर्नुपर्छ। पिप केही गर्दिन। र पनि उसलाई हाम्रो चालक दलको सदस्य ठान्छौं।'
अहिले एल्बेक परिवार स्कटल्यान्ड टापूमा सरेका छन्। यो सिड्नीको उत्तरी समुद्री तटमा पर्छ। जोका दुवै छोराहरू स्कुल फर्केका छन्। जो र गाइ 'टिन्नी' नामको माछा मार्ने डुंगामा यात्रा गरिरहन्छन्, पिपसँगै।
'पिप आफूलाई डुंगाकै कुकुर ठान्छे र यसलाई अँगालेकी छ,' जो पिपको स्वाभावबारे भन्छिन्, 'ऊ आफ्नो दैनिकीमा फर्किसकी र रमाएकी छ। डुंगाको अगाडि भागमा सुतिरहन्छे र हामीलाई चाटेर माया गर्दै दिन बिताउँछे।'
अहिले उनीहरू स्कटल्यान्ड टापूमै आफ्नो नयाँ जीवनमा रङ भर्न केन्द्रित छन्। उनी केही सकारात्मक हुँदै भन्छिन्, 'केही वर्षपछि फेरि डुंगा यात्रा गर्नेछौं भन्ने आश छ।'
पिपसँग तीन महिना बिताएकी स्टेनवर्ग भन्छिन्, 'हामीले आजीवन साथी बनाएका छौं। पिपलाई मिस गर्छौं भन्दै सामाजिक सञ्जालका पोष्टमा अहिले पनि प्रतिक्रिया आउँछ। यो वास्तवमै निकै रोचक कथा बनेको छ। यो कथाको एक हिस्सा हुन पाउँदा मलाई निकै खुसी लागेको छ।'